Isimada Puntland oo shir ka yeelanaya hanaanka ay u dhacayso doorashada soo socota (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 29, 2013 5:51 b 0
Garoowe, October 29, 2013 – Isimada kala duwan ee deeganada Puntland ayaa waxaa dhowaan u furmaya shir balaaran oo ay uga hadlayaan amaanka iyo xasiloonida wakhtiga doorashada iyo doorka waxgaradka iyo arrimo kale oo badan.
Suldaan siciid Maxamed Garaase oo ka mid ah isimada lana hadlay idaacada daljir waxaa uu sheegay in uu furmayo shirka, kaas oo ah mid intiisa badan diirada lagu saarayo in isimadu muujiyaan doorkooda xasilinta iyo nabadaynta doorashada dhacaysa.
Waxaa uu sheegay Suldaan Garaase in deeganada Puntland ay dhiseen isimo isu tegay, isla markaasna ay markasta door ku leeyihiin dhacdooyinka horumarka leh ee u baahan in sida haboon loo maamulo.
Docda kale suldaan siciid Maxamed Garaase waxaa uu isimada Puntland ugu baaqay in ay kaalinta haweenka ee xilibaanada muujiyaan wakhtigan la joogo, Suldaanka ayaa ka dalbaday isimada aan weli soo xulin xilibaanadooda in dumarka jaanis siiyaan.
8-da janaayo ee sanadka 2014 waxaa dhacaysa doorasho madaxtinimo oo haatan Puntland looga diyaar garoobayo, taas oo habka qabiiliga ah u dhacaysa markii Afraad, xulista xilibaanada ayaa socota waxaana isimada iyo Qaramada midoobey ay dhowaan ka wada hadleen doorka haweenka ee baarlamanka.
Dhegeyso: Xaliimo Sacdiyo oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Suldaan siciid maxamed Garaase